PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-09-10 - Masivuselelane ngezamagugu
Ilanga langeSonto - 2017-09-10 - Izindaba -
SESIQALA inyanga kamandulo (September), nokuyinyanga esinika ubuhle, yithemba nenjabulo. Ngiyazi ukuthi baningi abantu abansundu abangakhulumi ngobumqoka bale nyanga esizweni sethu thina bansundu.
Kuyabonakala silandela noma senza esiyaye sikubone kakhulu kulaba basentshonalanga abakwenza ukujabulela le nyanga enhle kangaka.
Le nyanga kamandulo singafundisana okukhulu ngayo, futhi lokho kungasilekelela ngezindlela ezehlukene ekubeni siwuphothule kahle unyaka.
Kumele sikuqaphele ukuthi yinyanga yokugcina lena esigabeni sesithathu sonyaka, okusho ukuthi sesisalelwe yizinyanga ezintathu nje kuphela, nokuyisigaba sokugcina salo nyaka esiwuphethe. Singasisebenzisa lesi sikhathi ukuvuselelana sisodwa, sisekelane nangamazwi ahlakaniphile, ukufundisana sichushisane kokuningi ukuze siwuphothule kahle unyaka wethu, singene komusha sinamandla amasha.
Inyanga kamandulo yaziwa njengenyanga lapho kuthwasa khona ihlobo. Le nyanga yaziwa njengenyanga lapho sibona khona kuqhakaza izihlahla, utshani nezimbali.
Umandulo uyinyanga lapho kugqugquzelwana khona ukwembatha izimpahla ezinhle ezihambisana nemibala egqamile, nokuluphawu lokuthokozela isikhathi esisha esiqhakazile, sokwethwasa kwehlobo. Uye ubone injabulo ibhalwe ebusweni kubantu abemukela lesi sikhathi ngale ndlela engiyibalule ngenhla.
Uthando nentokozo, wukwabelana ngezipho ezinjengezimbali ezinemibala egqamile, imiyalezo emihle enikana ithemba abantu ababhalelana yona, kuba ngezinye zezinto esiqaphelayo ngalesi sikhathi, ezenziwa ngabantu.
Ngalesi sikhathi sibona abantu bezihlela behlangana, beba nezigcawu zokucobelelana ngolwazi, bechushisana ngemikhakha eyahlukene yempilo - kungaba ngokwezemfundo, ezempilo, eze- ntuthuko yezengqondo, ezezimali neminye eminingi. Lokhu kusuke kwenzelwa ukuba singasali ngesikhathi imvelo ikhumula ingubo endala yobusika, yembatha ubusha nobuhle, thina sibe sisele kokudala.
Ngike ngakhuluma nenye insizwa eke yasebenza njengomphathi womnyango we z entengiso emsakazweni ukhozi F M, okungu mfokangcolosi, engazisa ukuthi yena lesi sikhathi uzosemukela ngokugqugquzela ukuzivocavoca, ukugijima, nokudla ukudla okunempilo.
Ngibonile ezithombeni angithumelele zona, ukuthi kugcwele emqondweni ukuthi lesi sikhathi kumele silethe ubumnandi nobusha ezimpilweni zethu.
Izwe lethu iningizimu Afrika i yemukela lenyanga nje nge yokuvuselela nokugqugquzela ulwazi lwamagugu ethu njengesizwe, sifunde sibuye sifundisane ngomlando wethu, nokuningi okuyifa lezwe lethu.
Okuhle kakhulu ngalesi sikhathi ezweni lethu kuba yilokho kokugqugquzela kakhulu ezokuvakasha, nokusinika ithuba lokuhambela izindawo ezahlukene ezweni lethu, futhi sifunde kabanzi ngalezo zindawo.
Lo mbhalo ngiwuhlanganise ngiseswazini lapho besiyingxenye yomgubho womkhosi wezintombi, bese sifunda nangomlando waleli zwe, kanjalo nokuhambela izindawo ezibalulekile kakhulu, sihlangane nabantu abehlukene nabanolwazi lwezinto ezahlukene.
Kimina lesi sikhathi sisho okukhulu, njengoba sengibalulile ngenhla. Nginombuzo othi wena usemukela kanjani lesi sikhathi? Kukhona yini okufundayo kulokhu okumbalwa engikunike khona?
Ngithembe ukuthi ezimpendulweni zakho, siba semuzweni owodwa wokucabanga, bese ngikufisela isikhathi esihle sokwethwasa kwehlobo.